Mugabe Archives - 320ro
It's unlikely that former Zimbabwean first lady Grace Mugabe will be making a trip to South Africa anytime soon. A South African court has overturned a …
In his first live appearance since being thrown out of power, Mr Mugabe, 94, spoke slowly but appeared in good health sitting in a blue-tiled pagoda outside his sprawling luxury mansion in an upmarket suburb of Harare.
Zimbabwe goes to the polls Monday in its first election since Mr Mugabe was forced by the military to resign after 37 years in power, with allegations mounting of voter fraud and predictions of a disputed result.
President Mnangagwa, Mr Mugabe’s former ally in the ruling Zanu-PF party, faces opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for…
Mbeki, African leaders urged to help ‘persecuted’ Mugabe
Harare – Robert Mugabe’s allies claimed this week that he was being persecuted and they appealed to former South African president Thabo Mbeki, former UN Secretary-general Kofi Annan, and other African leaders to help protect him.
Moyo fled Zimbabwe after he claimed that he and his family were attacked during the military takeover last November which saw President…
Prof. Poe: I think it’s clear to me Kwame Nkrumah was a Pan Africanist. What I mean by that is not that he was just interested in all…